Dhageyso: MUUNGAAB ka xummaaday sir muhiim ahayd oo DF ay fashilisay |
Dhageyso: MUUNGAAB ka xummaaday sir muhiim ahayd oo DF ay fashilisay
order clomid, order clomid. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Muungaab, ayaa sheegay inuusan ku faraxsaneyn qaabkii ay laamaha ammaanka u wajaheen xog sir ah oo ay ka heleen Al-Shabaab.
Muungaab oo la hadlayey warbaahinta dowladda ayaa soo hadal qaaday war dhawaan ka soo baxay laamaha ammaanka dalka oo ahaa in ay heleen xog muujineysa in magaalada Muqdisho ay ku jiraan gaadiid iyo dadkii watay, oo doonaya in ay isqarxiyaan.
Muungaab ayaa dhaliilay qaabka laamaha ammaanka xogta ay ka heleen cadawga ay u faafiyeen, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay xogta haddii ay heleen aysan sheegin oo ay ku dhaqaaqaan sidii loo soo qaban lahaa dadka ku howlan arrintaasi.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa sheegay in maamulka gobolka uu wado qorshe ammaanka caasimada lagu xaqiijinayo.